Sat, Aug 24, 2019 | 11:08:11 NST
14:01 PM (5years ago )
माघ ८ गतेभित्र संविधान घोषणा गर्ने संविधानसभा र दलहरुको प्रतिबद्धता छ । त्यस अनुसार संविधानसभाले आफ्नो काम पनि गरिरहेको छ । तर संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली जस्ता मुख्य विवादित विषय जस्ताको तस्तै छन् ।
यस बीचमा संविधानसभा बाहिर रहेका नेकपा–माओवादी लगायत पक्षको राय सुझाव लिने प्रक्रिया पनि सन्तोषजक रुपमा अगाडि बढ्न सकेन । नेकपा–माओवादीको माग बमोजिम असोज मसान्तमा डाकिएको सर्वपक्षीय सम्मेलन पनि हुन सकेन ।
आफूहरुले भनेजस्तो विषयमा छलफल नहुने र झारा टार्ने हिसाबले मात्र गर्न खोजिएको भन्दै माओवादी सहभागी नभएको हो । यस्तो बेला संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेकपा–माओवादीको भूमिक के हुन्छ ? माओवादीको अबको बाटो के ? यसै विषयमा उज्यालो अनलाइनका लागि मिलन तिमिल्सिनाले नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणसँग गरेको कुराकानी :
तपाईंहरुको माग अनुसार नै सरकारले सर्वपक्षीय सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । आफैं जानुभएन । किन यसरी ढाँट्नुभएको ?
हामीले भनेजस्तो नहुने भयो । गोष्ठी जस्तो गरेर सरकार र दलहरुले एकदिनमै कुरा मात्र सुन्ने हिसाबले सम्मेलन आयोजना गरेकाले हामी सहभागी नभएका हौं ।
तपाईंहरु सहभागी नभएपनि दलहरुले समयमै संविधान घोषणा गर्ने भन्दै काम अघि बढाएका छन् । यो अनुसार संविधान बन्यो भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?
यसमा दुईटा कुरा छ हेर्नुहोस् । पहिलो त हामी अझै पनि संविधानसभा बिघटन नहोस् भन्ने पक्षमा छौं । वार्ता भंग नहोस्, संवाद जारी होओस् भन्नेमा छौं । यसबारेमा उहाँहरुले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । दोस्रो कुरा के हो भने सहमति नगरीकन संविधान जारी भयो भने त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन । अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने यही हिसाबले जनताको संविधान त बन्दैन हेर्नुहोस । यो कुरा त पक्का हो ।
जनता भनेको चाहिँ को ?
जनता भनेको ९५ प्रतिशत हो । मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी जनजाति सबै हो ।
संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भनेर ७८ प्रतिशत जनताले भोट हाले । उनीहरु चाहिँ को त ?
त्यो ७८ प्रतिशतको कुरा त सेना परिचालन गरेर हो । स्वच्छ र निश्पक्ष ढंगले चुनाव हुने भन्दा पनि सेना परिचालन गरेर भएको हो । डर, त्रास र आतंक देखाएर जनतालाई सहभागी गराइएको हो ।
त्यस्तो त्रास त चुनावको बेला तपाईंहरुबाट पो धेरै भएको थियो त ?
होइन, हामीहरुबाट जनतालाई होइन । अरुलाई भएको हो त्रास । तैपनि दुवै पक्षबाट भएको थियो भन्नुस् । त्यो त हुन्छ चुुनावमा । जनताले कति भोट हाल्यो भनेर मापदण्ड हुँदैन ।
जे भएपनि नागरिक अब वाक्कदिक्क भैसके । समयमै संविधान बनोस्, दलहरु मिलेर अघि बढुन् भन्ने धेरैको चाहना छ । यो चाहना अनुसार तपाईंहरु कहिलेसम्म मिल्नुहुन्छ र संविधान दिन सक्नु हुन्छ त ?
तपाईंले भन्नुभएको जस्तो जनताले शान्ति र संविधान चाहेका छन् भन्ने कुरा साँचो हो । तर कुरा के हो भने संविधान त जनताको पक्षमा बन्नुपर्छ । अहिले प्रष्ट कुरा के छ भने हामी बाहिर छौं । संविधानसभा त हाम्रो नारा हो नि त । हामीले ल्याएका हौं नि त । अहिलेको सन्दर्भमा त एउटा शक्ति हामी बाहिरै पर्यौं । अर्को शक्ति एमाओवादी हो । त्यहाँ पनि सहमति छैन । प्रक्रिया भनिएको छ । प्रक्रियाबाटै जबर्जस्ती जाने हो भने त त्यो हुनेवाला छैन । मुलभूत कुरा त जो हिस्सेदार हो, जसको शेयर छ यी सबै पक्रियामा बाहिर छन् । अब के हो भने जनताको पक्षमा संविधान बन्दैन भने त संविधान छ भनेर मात्र हुँदैन । सत्ता जसको हातमा छ, उसले त सत्ताबाट पेल्ने मात्र गर्छ । हाम्रो पनि के हो भने जनयुद्धको प्रक्रियामा हामीले पनि धोका खायौं, हार्यौं । तर पनि हामी पनि एउटा लक्ष्य सहित आएका त थियौं नि । त्यसकारण लक्ष्यको कुरा हामीले छोड्ने कुरा पनि भएन ।
त्यसो भए जनतालाई संविधान कसरी दिने त ? तपाईंहरुको कुनै नयाँ बाटो छ संविधान ल्याउने ?
एउटा कुरा त संविधान बनाउने मात्रै भन्ने अर्थ र अवस्थामा हुँदैन । संविधान त जसरी पनि बन्न सक्ला । तर हामीलाई के लाग्छ भने जनताको पक्षको संविधान कुनै पनि हालतमा बन्दैन ।
एकपटक बनिसकेपछि फेरि संविधानमा परिवर्तन गर्न त सकिएला नि, होइन र ?
हामी यो संविधानको पक्षमा छैनौं । सिधा कुरा यो जनताको पक्षमा हुँदैन । जन विरोधी छ ।
कस्तो भयो भने जनताको पक्षमा हुन्छ त ?
कस्तो भयो भने हुन्छ भन्दा संघर्ष गर्ने शक्ति सत्तामा आउनुपर्छ । सोझो कुरा ।
चुनावमा सहभागी भएर सत्तामा किन नगएको त ?
त्यो त जबर्जस्ती गराएर चुनाव गरे त । मैले भनिसकें नि । मूल कुरा के हो भने सत्ता जसको हातमा छ, उही जान्छ । उसले भने अनुसारकै संविधान बन्छ ।
सत्तामा जाने पनि त प्रक्रिया हुन्छ नि ?
हुन्छ, त्यो प्रक्रिया दुईवटा हुन्छ । एउटा कुरा चुनावबाट पनि हुन्छ । अर्को कुरा बल प्रयोग गरेर पनि हुन्छ ।
त्यसो भए बल प्रयोग गरेरै पुग्ने हो ?
हो, साँचो कुरा । १० वर्ष त गरियो ।
त्योबेला त गर्नुभएको हो । तर त्यो बाटो लामो भयो भनेर स्वीकार गरेर शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आउनुभएको होइन र ?
कहाँ स्वीकार गरेका छौं ? छैनौं । संसदीय प्रक्रियामा आउँछु भनेर स्वीकार गरेका होइनौं । साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हामी नयाँ ढंगबाट जान्छौं भनेर आएका हौं । १२ बुँदेको कुरा गर्नुहुन्छ भने १२ बुँदे त हामी मान्दैनौं नि त ।
त्यो बेला किन मान्नुभएको त ?
त्यो बेला म कहाँ थिएँ त । जेलमा भएको बेला भएको हो ।
तर तपाईंको पार्टीले मानेर आएपछि तपाईंले पनि मानेजस्तो भएन र ?
त्यही नभएर, कुरा नमिलेर त हामी छुट्टिएका हौं नि । चुनवाङ बैठक मानेनौं । संसदीय व्यवस्था म मान्दिन । हाम्रो पार्टी मान्दैन । त्यो मान्ने भए त ०४७ सालमै मानिन्थ्यो त । कम्युनिष्टहरुले संसदीय व्यवस्था मान्दैनन् । उपयोग मात्र गर्छन् । तर हामीले त उपयोग गर्ने स्थिति पनि त भएन ।
त्यसो भए बल प्रयोग गरेर जाने बाटो अहिले चाहिँ छ त ?
हेर्नुहोस् तपाईंले जनता जनता भन्नुभयो । संविधान संविधान भन्नुभयो । त्यो एक हिसाबले ठीक होला । अर्को हिसाबले भन्नुहुन्छ भने जनताको संविधान बन्दैन । संसदवादी, यथास्थितिवादी, पश्चगामी संविधान बन्नेवाला छ । त्यो संविधानको जनताले पनि समर्थन गर्दैनन् । हाम्रो पार्टीले पनि समर्थन गर्दैन । त्यही भएर हामीले नयाँ राष्ट्रिय सहमति गरौं न त भनेका हौं । तर उहाँहरुले सहमति कायम गर्न मान्नुभएन । अनि हामी पनि उतापट्टि जान मानेनौं । हुनुपथ्र्यो के भने त्यति धेरै हतार गर्नु हुन्नथियो । छलफल र बहस गरेर एउटा निकास निकाल्ने पर्यत्न गर्नुपर्थ्यो ।
तर संविधान बनाउने बेला त बित्न लाग्यो नि त ?
हामीले रोकौं भनेका त छैनौं नि । त्यसमाथि उहाँहरुमा पनि कुरा मिलेको छैन । धेरै मुद्दामा अझै असहमति छ । जे होस् मिल्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । मिल्यो भने हामी पनि मिल्ने छौं ।
के भयो भने मिल्नुहुन्छ त ?
मैले भनिहालें नि दुईवटा कुरा हुनुपर्‍यो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा जोडिएका विषयहरुमा सहमति जुट्नुपर्यो । यो सर्वपक्षीय सभाको हैसियत के हुने ? यसको क्षेत्राधिकार कति हुने ? यसको बारेमा कमसेकम सहमति होओस् । यो भयो भने हामी जानेवाला थियौं । हामी पनि संविधान बनाउन चाहन्छौं र हामीले बनाउन चाहेको संविधान कस्तो हो भन्ने कुरा पनि हामी केही दिनभित्र बाहिर ल्याउँछौं ।
कस्तो हुन्छ त्यो संविधान ?
कस्तो भन्ने कुरा त हामी छलफल गर्छौं, बहस गर्छौं । त्यो हामी ल्याउँछौं । यतापट्टि पनि छलफल हुँदै जाला । तर कुरा के हो भने संविधान मात्रै भन्ने कुरा होइन ।
संविधानसभा भित्र रहेका दलहरुले संविधान बनाए र त्यो जनताले माने भने नि ?
त्यो त जनताले मान्दै मान्दैनन् । मलाई थाहा छ जनताले मान्दैनन् भन्ने कुरा । घुमाई फिराई त्यही संसदीय व्यवस्था ल्याउने कुरा जनताले कहाँ मान्छन् ? मान्दैनन् ।
जनताले मान्ने खालको संविधान ल्याउन तपाईंहरुबीच फेरि छलफल र सहमति कहिलेसम्म होला ?
त्यो यसै भन्न सकिन्न । हामी अहिले पनि जुन सर्वपक्षीय सभा भनेर भनेका छौं, त्यसलाई भंग नगरियोस् । अझै सहमति कायम गरेर जाऔं नै भनिरहेका छौं । राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गरेर जाने हिसाबमा उहाँहरु आउनुहुन्छ भने हामी छलफल गरौं । बहस गरौं । अब त्यसबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ, अहिले नै भन्ने कुरा भएन । यदि उहाँहरु त्यो प्रक्रियाले आउनुहुन्न भने हामीले त यो संविधानसभाको बिघटन नै हुनुपर्छ भनेका छौं । संविधान बनिहालेछ भने पनि त्यो जनताको पक्षमा हुँदैन । हामीले चाहेको संविधान बन्दैन । त्यो अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दैन । द्वन्द्व समाधान पनि हुँदैन । संघर्ष फेरि आफ्नो तरीकाले अगाडि बढ्छ ।